Yakanakisa Isina-chepfu inogadzikana ekurapa michina yakajeka girazi jekiseni fekitori uye vagadziri | Aimsea
Calcium Zinc (CaZn) isiri chepfu PVC Stabilizers inoshandiswa mumazana ezvigadzirwa zvigadzirwa nemidziyo ine zvimwe zvinoshandiswa zvinoramba zvichikudziridzwa. Yakagadzirwa kubva kuPVC inogona kuumbwa neakanakisa kujekesa kubvumira kuenderera mberi kwekutarisa kuyerera kwemvura. Kwete chete iyo PVC inopa inochinjika yekushandisa asiwo yesimba, hutano zvimiro, kugadzikana uye kunyangwe pasi pekupisa nemamiriro. Kune rimwe divi, zvinodzora zvePVC zvinoita basa rakakura mukukwiridzira mutengo wehutano.
Isiri-chepfu inogadzikana, hapana simbi inorema inokuvadza, kutsiva yechinyakare inosimudzira, chengetedzo uye hutsanana, zvakanaka kuchengetedza nharaunda
Yakanaka yekutanga mavara uye yakanaka refu-kugadzikana;
Kaviri kuomesa nekusimudzira kusungunuka, plasticizing fluidity yakanaka, hapana ndiro kunze;
Iyo ine yakanakisa kudziya kutsiga uye lubricity, ine mwenje kudzikamisa mhedzisiro, yakanakisa mamiriro ekunze kusagadzikana, inogona nenzira kwayo kudzikisira muyero we titanium dioxide; nemishonga sulfide kusvibiswa, anogona kunatsiridza rekunze kushandiswa maturo zvigadzirwa;
Dispersibility, yakanaka anti-deformation, kunatsiridza ruvara uye kuomarara kwechigadzirwa, uye kugadzirisa kunatsa kwechigadzirwa;
Iyo ine yakasarudzika yekubatanidza basa, iyo inopa yakanaka disersibility kune iyo yekuzadza, inowedzera kuputira neiyo resin, inovandudza mashandiro echigadzirwa, inoderedza michina kupfeka uye inowedzera hupenyu hwebasa hwechigadzirwa;
Inogona kuwedzera kusungunuka kwesimba, kukurudzira kupupa furo, uye kuita masero yunifomu uye akanaka. Iyo yepamusoro yechigadzirwa yakati sandara, ruvara rwakagadzikana, kutsauka kwemavara kudiki, uye mutengo wekugadzira unogona kuderedzwa.
Yakadzika madota zvemukati
Isinonhuwirira, Hapana phenol
Isiri-Inotyisa, isina kunhuhwirira & inoshamwaridzika nharaunda
Hapana atomization & isina ndiro kunze
Izvo zvakaderera zvemukati zviri nyore oxidizable chinhu
Sutu yezvinhu zvakaomarara zvakatipoteredza furo zvigadzirwa zvePVC, senge wallboard uye jira nemahwindo ane mapofu .Through SGS bvunzo, inosangana neRoHS, EN71 ， EN1122, EPA 3050B, FDA 21CFR .172 888 dzakateedzana standard mupasi.
1 - Yakagadziriswa fomula
Mbishi materia l
Impact Modifier Benzi g mumiririri ACR Anopupuma furo
Calcium kabhoni e
chipimo chemushonga 100 4-6
0.5-1.5 0.5-2 6-12 20-80 1-2 yakakodzera
A-> Kusanganisa maitiro data:
Kupisa kwekupisa: 100-110 ℃ Tembiricha inotonhora: 40-50 ℃
B-> Kubvisa maitiro:
Screw humburumbira1 nzvimbo Screw humburumbira2 nzvimbo Screw humburumbira3 nzvimbo Screw humburumbira4 nzvimbo Confluent musimboti Mould musoro Muromo muforoma
PVC inoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kwekurapa nhasi nekuti haina kupindirana nemajemusi, inoshambidzwa zviri nyore uye inopa mashandisirwo-ekushandisa ayo anoderedza hutachiona muhutano.
PVC yanga ichishandiswa munzvimbo yekurapa kweanopfuura makore makumi mashanu. Yakatanga kugadzirwa kuti igadzire machubhu nemidziyo kutsiva iyo rabha uye girazi iro raimbove rakashandiswa kunyorera muhutano. PVC inogona zvakare kubatanidzwa pamwe neakakwira frequency welding nekudaro ichibvumidza kune akasiyana maumbirwo emidziyo nemhando dzakawanda dzekubatanidza. Zvekutengesa zviripo PVC yakanyanya branched uye ine yakaderera crystallinity. Midziyo yakagadzirwa nerudzi urwu rwePVC ine simba riri nani, hunhu hwakanyanya uye nani simba repamusoro.
PVC inopawo kuchinjika kunodiwa mukushandisa senge masaga eropa nemidziyo ye IV, asi inogona zvakare kuvimbwa nesimba rayo nekusimba, kunyangwe pasi pekuchinja tembiricha nemamiriro. PVC inogona zvakare kuburitswa nyore kuita IV tubing, thermoformed kugadzira 'blister' kurongedza kana kufuridza kuumba kuti igadzire midziyo yakaoma. Ichi chinowirirana ndicho chikonzero chikuru nei PVC chiri chinhu chesarudzo yechigadzirwa chekurapa uye vekugadzira mapakeji.
Pashure: Polyvinyl Chloride Stabilizer yeshangu & inotsvedza chete PVC furo mbishi zvinhu
Zvadaro: Yakanaka plasticizing PVC inogadzikana yekuchengetedza magogoni ekurapa mudziyo weuswa uswa
Pvc Kupisa Stabilizers Kwekurapa Giredhi
Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC yokuvirisa, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Stabilizer, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile,